MadaxweyneTrump oo diiday inuu saxiixo qorshe muhiim u ah shacabka Mareykanka – Radio Daljir
MadaxweyneTrump oo diiday inuu saxiixo qorshe muhiim u ah shacabka Mareykanka
Diseembar 27, 2020 9:32 b 1
Malaayiin shacabka Mareykanka ah ayaa si ku meel-gaar ah u lumiyay macaashka shaqo la’aanta. kadib markii Madaxweyne Donald Trump uu ku guuldareystay inuu saxiixo sharciga gargaarka ee loo yaqaan ‘ gargaarka Covid ‘ si loo dhaqangaliyo.
Faa’iidooyinka ay heli lahaayeen dadka shaqo la’aanta ah ayuu arrinkan saameyn doona.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka fiidnimadii Sabtida, Mr Trump wuxuu mar kale difaacay mowqifkiisa ku aaddan arrinta.
DFS oo ka raadinaysa Beesha Caalamka dhaqaalaha ku baxaya Doorashada